Bogga ugu weyn Maalgelinta Hantida Ma guurtada ah: 15 Talooyin Ku Saabsan Maalgelinta Hantida Guryaha ee Bilowga ah
Maalgelinta hantida maguurtada ah waxaa lagu yaqaanaa inay tahay ganacsi faa'iido leh oo weligeed sii kordhaya. Adduunkeenna maanta, qofku wuxuu samayn karaa lacag aad u fara badan isagoo ku biiraya suuqa hantida maguurtada ah isagoo ah maal -gashade guri ama wakiil, midkoodna waa ikhtiyaar shaqo oo wanaagsan oo leh faa'iidooyin iyo caqabado aan u babac dhigi karin.
Suuqa hantida maguurtada ah waa mid leh ciyaartoy badan oo wanaagsan oo ka dhigaya suuq tartan. Si kastaba ha ahaatee, midna uma baahna in la niyad jabiyo halkii laga rabay inuu xoogga saaro sameynta astaan ​​mudan in la xuso.
WAA MAXAY MAALGELINTA DHABTA AH?
Ereyga hantida maguurtada ah ayaa sidoo kale loo yaqaan hanti ma guurto ah oo ay ku jiri karto dhul, dhismayaal. Waxa kale oo ay noqon kartaa xuquuqda hawada/dhulka hoostiisa kor iyo hoosba siday u kala horreeyaan iyadoo wax kasta oo la taaban karo oo aan la dhaqaajin karin ay dul saaran tahay. Tusaalooyinka waa guryaheena, dabaqyada dhaadheer ama xitaa taangiyada septic ee dhulka hoostiisa, waxay kaloo noqon kartaa uun dhul ka maqan dhismayaashaan oo dhan oo aan ku tilmaamno dhul aan la hagaajin.
Maalgelinta hantida maguurtada ah waa iibsashada, maareynta, kiraynta ama iibinta guryahaas si loo helo faa'ido.
NOOCYADA MAALGELINTA DHABTA AH
Markaad maqasho weedha maalgashiga hantida maguurtada ah, waxa ugu horreeya ee ku soo dhaca maskaxda dadka waa iibsashada guri iyo kiraysasho ama laga yaabo inay ku iibiso qiimo ka sii sarreeya laakiin runtu waa arrintu waa maalgelinta hantida maguurtada ahi way ka badan tahay tan, in kasta oo ay tahay mid kala doorasho badan.
Waxaa jira noocyo kala duwan oo maalgelinta hantida maguurtada ah oo si gaar ah loogu qaybiyay laba.
Waxaan leenahay maalgashiga hantida maguurtada ah oo ay ku jiraan Dhulka, Guryaha iyo Ganacsiga.
Maalgashiga guryaha muuqaalka ahi wuxuu keenaa faaiido aad u sareysa wuxuuna u baahan yahay lacag badan hore. In kasta oo maalgashiga hantida maguurtada ah ee aan ahayn jirka ee ah noocyada kale ee maalgashiga hantida maguurtada ah ee aan u baahnayn hal lahaansho hanti jireed, waxaa ku jira aagag badan oo la isku ururiyo iyo REITs (Trusts Investment Real Estate). Waxa kale oo loo qaybin karaa dakhli dadban oo firfircoon. Waa mid saaxiibtinimo dhaqaale leh, oo kuu oggolaanaysa inaad ku maalgaliso hanti badan oo ma -guurto ah wax ka yar intii caadiga ahayd ee ay ku kici lahayd inaad ku maal -galiso hal hanti oo jir ahaaneed. Hoos waxaa ku qoran shanta nooc ee maalgashiga hantida maguurtada ah si loo tixgeliyo haddii aad qorsheyneyso inaad gasho meheradda:
DHAQAALAHA HANTI DHEXE EE GANACSIGA
Hantida ma -guurtada ah waxay ku lug leedahay maal -gelinta guryaha aan loogu talo -gelin deggenaanshaha, maalgashaduhu wuxuu leeyahay oo kiraynayaa meel qof ama meherad adeegsan doonta. Maalgashiga ganacsigu waa ganacsi aad u macaash badan wuxuuna soo saaraa dakhli badan marka la barbar dhigo maalgashiga deegaanka wuxuuna leeyahay halis dayactir oo yar inkasta oo hantidaadu ay la macaamilayso dadweynaha guud oo aan ahayn dad kooban, maalgashadayaashu waxay u muuqdaan inay ka walwalaan qof ku dhaawacma dhismaha. Tusaalooyinka maalgashiga hantida ma guurtada ah ee ganacsiga waxaa ka mid noqon kara, huteelada, bakhaarada, xafiisyada, dukaamada tafaariiqda iwm. Hantida ma guurtada ah ee ganacsiga waxaa lagu sii dari karaa maalgashiga guryaha warshadaha iyo tafaariiqda, halkaasoo hantida ma guurtada ah ee warshadu ay ka mid tahay dhaqidda baabuurka, bakhaarka iyo wixii la mid ah, oo loo diyaariyey dadweynaha si loo helo dakhli halka kan dambe uu ka kooban yahay suuqyada wax laga iibsado ama dukaamada tafaariiqda Mulkiilaha gurigu wuxuu helaa waxoogaa boqolkiiba iibka ay sameeyeen kiraystayaasha marka lagu daro kirada saldhigga caadiga ah si loogu dhiirrigeliyo inay guriga u ilaaliyaan si habboon.
Maalgashiga Hantida Dhabta Ah Ee Dadka Degaanka
Maalgelinta hantida maguurtada ah ee la deggan yahay ayaa ah tan ugu caansan dhammaan noocyada kala duwan ee maalgelinta hantida ma guurtada ah. Taas oo la leeyahay waxaa jira noocyo badan oo maalgashi deegaan ah oo aan dadka badankiisu aqoon. Tusaalooyinka waxaa ka mid ah;
Guryaha kirada ah: iibsashada ama dhisida guri iyadoo ujeedadu tahay in la kireeyo.
fasax Renal: Tani waxay la mid tahay hantida kirada ah laakiin maalgashaduhu wuxuu xoogga saaraa inta badan dalxiiska isagoo guri ka iibsanaya meel caan ah oo qurux badan oo dalxiisayaashu yaqaaniin wuxuuna ka kireeyaa kuwa wax iibsada.
Fiiqa/ Microflipping: Maalgashiga noocan ah, maalgeliyuhu wuxuu iibsadaa guri lagu iibinayo qiimo ka hooseeya qiimahiisa gaar ahaan kan u baahan dayactirka oo iibiya kadib hagaajintiisa. Maalgalinta hantida ma guurtada ah ee noocan ah waa mid aad halis u ah maadaama maalgashaduhu uu doonayo inuu lacag badan geliyo mana jirto wax damaanad ah inay dib u heli karaan lacagtooda oo dhan. Dhinaca kale Microflipping uma baahna halis noocaas ah maadaama maalgashaduhu si dhakhso ah u iibiyo hantidii la iibsaday iyada oo aan wax badan la hagaajin.
Unugyada Deganayaasha Qalabka (ADU): Tani waa meesha aad ka kiraysato booska dheeraadka ah ee gurigaaga adiga oo u rogay guri kiraystaha si aad u hesho dakhli dadban. Caadi ahaan waa ka jaban tahay marka la barbar dhigo noocyada kale ee maalgashiga.
Laga soo bilaabo erayga Raw Land, waxa ugu horreeya ee maskaxda ku soo dhaca waa dhul aan waxba ku jirin (yacni dhisme ama kaabayaal la'aan). Dhulka aan la horumarin ayaa aad uga jaban in la maalgashado marka loo eego dhul la hagaajiyay waxayna u egtahay in qiimihiisu qiimeeyo waqtiga. Iibsashada dhul iyo dhisida naftaada ayaa kaa badbaadin doonta kharash laakiin inta badan maalgashadayaasha dhulku waxay dhulkooda kiraystaan ​​sanado yar ama beeralayda si ay u adeegsadaan beeraha ama waxay iibsadaan dhulal leh awood aad u sarreeya oo qiimayn mudan si ay hadhow dib ugu iibiyaan. Maalgashiga noocan ahi waa mid kharash badan maadaama uu u baahan yahay raasumaal aad u weyn laakiin si sahlan loo dayactiro.
XIDHIIDHKA: Sida Looga Bilaabo Ganacsi Tennessee 2022: Tusaha Ugu Dambeeya, Tallaabo-tallaabo
MAALGELINTA HANTIDA HANTIDA (REITs)
REITs waa shirkado leh hanti ma guurto ah oo ganacsi sida hoteellada, suuqyada wax laga iibsado, isbitaallada ama xitaa xafiisyada). Waxay kuu oggolaanayaan inaad maal gashato guryaha ay maamusho shirkaddu qaab saami ah oo ku saabsan is -weydaarsiga saamiyada oo kuu badbaadinaya qiimaha lahaanshaha hantida. REITs waxaa loo arkaa inay tahay hab lagu abuuro dakhli dadban qaarna si guud ayaa looga ganacsadaa kor u qaadista saamiyada taasoo bixisa dheecaan ka badan foomamka kale ee ku saabsan maalgashiga guryaha. Maalgashadayaashu waxay helaan faaiidooyin haddii ay dhacdo inay yaraadaan lacag caddaan ah, waxay ku beddeli karaan saamigooda sarrifka saamiyada.
QORSHAHA MAALGELINTA HANTI KHASAASI AH
Habkan, maal -gashadayaashu waxay isu yimaadaan iyagoo samaynaya koox si ay u maal -gashadaan fursado aysan iyagu kaligood maalgelin karin. Qaar ka mid ah maal -gelinta dad -weynaha ayaa u furan maal -gashadayaasha guud halka kuwa kalena ay u baahan yihiin maal -gashadayaal leh qiime saafiya qaarkood si ay u maal -gashadaan. Si ka duwan maalgashiga kale ee u baahan muuqaalka muuqaalka, isku -uruurinta dadka waxaa lagu sameeyaa onleenka waana ka kharash yar yahay marka la barbar dhigo kuwa la midka ah ee guryaha la deggan yahay iyo kuwa ganacsiga ee u baahan lacag aad u badan oo raasumaal iyo kharash dayactir ah.
Si ka duwan REIT -yada, maal -gelinta hantida ma guurtada ah ee buuxsamaysa ma aha ganacsi dadweyne taas oo macnaheedu yahay in ay yihiin kuwo aad u liidata, taas oo macnaheedu yahay in maal -gashadeyaasha maalgelin lagu sameeyay laba sano oo aan la soo bixin karin markaad u baahato. In kasta oo la ogyahay in ay leeyihiin taariikh gaaban oo aan weli la kulmin hoos u dhac dhaqaale.
WAA MAXAY MAALGELINTA HANTI DHAB AH?
Faa'iidooyin dhowr ah ayaa ku imanaya maalgelinta hantida maguurtada ah, kuwaas oo intooda badan aad hore u ogtahay. Qaar ka mid ah faa'iidooyinkaan waxaa ka mid ah faa'iidooyinka canshuurta, qaddarinta, socodka lacagta, dakhliga kirada iyo wixii la mid ah.
Maadaama aan wada ognahay in hantida maguurtada ah ay u muuqato inay kordhiso qiimaha waqti ka dib, iibsashada iyo keydinta waxay umuuqataa dariiqa kaliya laakiin maahan maadaama maalgashadayaashu ay awood u leeyihiin inay ka dhigaan hantidooda qiime qiime. Tusaale ahaan dayactirka gurigaaga ayaa kordhin kara qiimaha haddii ay tahay jikada ama hagaajinta musqusha, qiimaha guriga ayaa kordhaya. Laakiin dhammaan dib -u -habaynta ma soo saarayaan natiijooyin wax -ku -ool ah sidaa darteed samaynta cilmi -baaristaada si aad u ogaato nooca dib -u -habaynta keeni doonta korodhsi sidoo kale waa lagama maarmaan.
Hantida ma guurtada ah waxay siisaa maalgashadayaasha awood ay ku soo saaraan qulqul lacageed kaas oo faa iido ugu ah maalgashadayaasha hantida ma guurtada ah. Cash Flow waa macaashka guud ee laga helo maalgashiga hantida maguurtada ah kadib bixinta deynta guriga iyo kharashyada. Kiisas badan ayaa muujiyey in socodka lacagta caddaanka ahi uu kordhayo kaliya marka aad dhisato hantidaada oo aad bixiso deynka guriga.
Maalgashadayaashu waxay ka faa'iideysan karaan canshuur dhimista. Adigoo ah mulkiilaha guriga, kiraynta gurigaaga micnaheedu waa inaad waddo meherad (milkiile) iyo inaad tahay milkiilaha meheradda waxaad ka jari kartaa kharashyo yar sida kharashka dayactirka, dulsaarka amaahda amaahda lagu bixiyo deyn, caymiska milkiilaha guriga iyo qiimo -dhaca oo ku faafay muddo ee 27.5 iyo 39 sano ee guryaha la deggan yahay iyo kuwa ganacsiga siday u kala horreeyaan.
Maalgelinta hantida maguurtada ah waxay kaa badbaadineysaa dhaqaale ahaan. Si ka duwan maalgelinta suuqa saamiyada ama kaydinta lacagtaada bangiga, marka aad maalgelin ku samayso hantida maguurtada ah muddo dheer waxaad ogtahay in hantidaadu qiimaynayso. Maalgashadayaasha badankoodu waxay ku maalgashadaan hantida maguurtada ah si ay u taageeraan dakhligooda ama aad leedahay hanti aad leedahay muddo dheer oo aad rabto inaad iibiso maxaa yeelay waxaad hawlgabtay si aad macaash u hesho si aad u kordhiso dakhligaaga hawlgabka.
Dad badan ayaa u janjeera inay ka fogaadaan maalgashiga maxaa yeelay markay maqlaan erayga “maalgashi” waxa kaliya ee ay ka fikiraan waa inta raasamaal ee ay u baahan doonaan si ay uga faa’ideystaan ​​taas oo ah caadooyinka maalgashiga nooca ugu badan laakiin hantida maguurtada ah way ka duwan tahay macnaha in ay u samaysay shuruudo maalgashadayaasha iman kara si ay uga faa'iidaystaan ​​maalgashigooda maadaama aad lahaan karto qayb ka mid ah hantida oo faa'iidada aad ku hesho beddelkeeda, waxaad go'aansan kartaa inaad maalgelin badan samayso.
Maalgelinta hantida maguurtada ah waxaad haysataa wax aad ku wareejiso dhaxalkaaga. Dad badan ayaa dareemaya inay lacag caddaan ah uga tagayaan carruurtooda iyo qoyskooda ayaa ka muhiimsan, inkasta oo xaqiiqda ah inay tahay fikrad wanaagsan aan lagu murmi karin laakiin hantida maguurtada ah xitaa way ka fiican tahay.
SIDEE BILOWGAYAASHA UGU Maalgaliyaan HANTI DHAB AH OO LACAG KU SAMEEYA?
Inaad ka fikirto inaad bilowdo xirfaddaada sida maal -gashade hanti -ma -guurto ah runtii waa wax fiican laakiin sida xiisaha leh iyo af -ka -hadalka sida ay u muuqato ma aha hawl fudud. Waa hab la hubo in dhaqaale ahaan lagu farxo oo lagu guulaysto laakiin ma beddesho xaqiiqda ah inay tahay ganacsi dhib badan maadaama ay u baahan tahay xirfad, cilmi -baaris, dadaal iyo qorshe badan haddii aadan rabin inaad khasaare ku socoto.
Waxa ugu fiican ee ku saabsan waa marka aad ogaato sida loo bilaabo markaa wax yar ayaad ka welweshaa. Halkaan waxaa ah dhowr tallaabo oo lagugu meeynayo waddada saxda ah oo lagugu diyaarin karo tartanka si aad hodan u noqoto
Helitaanka waxbarasho sax ah oo ku saabsan guryaha dhabta ahe. Kahor intaadan iibsan hantidaada koowaad ama aadan ku biirin maalgashi kasta, samee natiijooyin si aad u ogaato halista ku lug leh ganacsiga.
Dhis shabakad hanti ma guurto ah. Sida bilowga ah ee ku saabsan arrimaha keligaa ayaa kuu furaysa ixtimaalka sare ee wax khaldan iyo inaad lumiso. Shabakad wanaagsan ayaa kuu soo bandhigaysa fursad aad ku yeelan karto aasaas adag. Tusaale ahaan inaad haysato la -taliye si uu kuu dhex -mariyo, wakiil kaa caawiya helidda hantida maal -gelineed ee saxda ah, Qareen ku haga oo kugu cusboonaysiiya sharciyada iyo xeerarka hagaya khadka aad dooratay ee ganacsiga iyo xisaabiye kaa caawiya canshuuraha hantida maguurtada ah.
Abuuritaanka qorshe falanqayn suuqa maaliyadeed iyo kiro. Tani waxay badbaadisay waqtiyo badan oo hore maadaama aad u baahan doonto inaad falanqeyso inta aad rabto inaad ku maal gashato hanti, ha ahaato haddii meelaynta hantidaada la sheegay ay faa iido yeelan doonto, waa maxay qiimaha dayactirka, miyaad abuuri doontaa socod lacag caddaan ah oo togan ama maya iyo wixii la mid ah, ka hor intaadan iibsan guriga oo weliba waxay kaa caawineysaa inaad hesho habka ugu wanaagsan ee suurtogalka ah ee lagu maalgeliyo hantidaada.
Doorashada istaraatijiyad maalgashi oo wanaagsan iyo goob wanaagsan. Goob wanaagsan ayaa hubaal saamayn doonta heerka dakhligaaga sidoo kale istaraatiijiyadaada. Tusaale ahaan haddii aad rabto inaad kiradaada dul saarto haddii ay tahay mid xirfadeed ama ujeeddo deggenaansho, waxaad fiirin doontaa goobta oo aad weydiin doontaa su'aalo sida “ma yihiin meelaha dadku rabaan inay soo booqdaan ?, aaggu ma habboon yahay?” Iibinta dhulkana “meeshani ma u furan tahay horumar?” Arrimahan oo kale waa waxyaabo aad hubaal rabto inaad tixgeliso.
Hel hantida maalgashiga ugu fiican. Ka dib markaad tixgeliso dhammaan qodobbada kor ku taxan markaa waad sii socon kartaa oo dooran kartaa hanti ku habboon oo soo saari doonta dakhli togan.
Maareynta hantidaada. Kani waa tallaabo hawl -qabad leh maadaama ay kaaga baahan tahay inaad hesho oo hubiso kiraystayaasha, ururinta kirooyinka, dayactirka iyo dayactirka daruuriga ah. Waxaad heli kartaa maareeye si uu u maareeyo qaybtan haddii aad tahay qof aad u xiiso badan ama aad adigu samayso maaddaama inta badan maalgashadayaashu ay noqdaan maamuleyaal maalgashi oo xirfad leh.
Ka dib markaad raacdo dhammaan tillaabooyinka kor ku taxan dhaqaalahaaga markaa waxaad go'aansan kartaa haddii aad rabto inaad gasho wax -qabad, haynta, rogid ama Microflipping, maalgashi hanti ma guurto ah ama ganacsi oo hadda ku xirnaan doona raasamaalkaaga iyo nasiib wanaag maal -gashadayaasha hantida maguurtada ah waxay leeyihiin fursado badan si loo waafajiyo raasamaalka waxaa laga yaabaa inaad ha weynaato ama ha yaraato.
XIDHIIDHKA: Goobaha kale sida Redbubble ee 15 | Dib u Eegid Buuxda
Immisa ayuu sameeyaa maal -galiyaha dhabta ah ee bilowga ah?
Sannadle ah xirfadle maal -gashade hanti ma -guurto ah wuxuu kasbadaa celcelis ahaan $ 140,000 illaa $ 200,000 oo xilliyada wanaagsan wuu ka sarreyn karaa intaas laakiin bilowga waxay kasbadaan celcelis ahaan qiyaastii $ 80,000 illaa $ 120,000 taas oo ku xidhan nooca maalgashi ee ay ku biireen.
SIDEE LOOGA HELI KARAA HANTI DHAB AH LACAG YAR?
Dad badan ayaa la halgamaya su'aalo ay ka mid yihiin "halkee baan ka helaa lacag aan ku maalgashado hantida ma guurtada ah ama sideen ku iibsadaa hanti markaan lacag waayo?" Haddii aad ka fekereyso siyaabo aad ku maal gashan karto hantida ma guurtada ah lacag yar, markaa waa inaad taqaanaa sida looga faa'ideysto lacagta dadka, aad leedahay awood aad ku fahanto oo aad ku ogaato fursadaha. Halkaan waxaa ah liis ah 4 siyaabood oo ugu wanaagsan ee looga bixi karo
Maalgelinta Iibiye: inaad lacag ka hesho iibiyaha waa dariiqa kaliya ee lagu gaari karo yoolkaaga, tani waa marka iibsadayaashu ay siiyaan iibiyaha lacag ay ku iibsadaan hantida la sheegay.
Leasing: iibsadaha waxaa laga qaadaa lacag bille ah ama sannadle ah oo khidmadda dheeraadka ah ee kirada ayaa markaa loo wareejin doonaa qiimaha iibsiga guriga.
Samaynta iskaashiyada: marka qiimaha maalgashigu aad u sarreeyo, maal -gashadayaashu waxay isu yimaadaan si ay u maal -gashadaan ama u iibsadaan hantida markaa macaashka ayaa la wadaagayaa iyadoo la eegayo boqolleyda uu maalgashade kastaa ku darsaday.
Trading Houses: halkan waxaad u isticmaali kartaa hanti duug ah si aad u hesho mid cusub. Ka sokow helitaanka hanti cusub waxay sidoo kale kaa caawin doontaa inaad ka fogaato guulaha raasumaalka ah ee badanaa la xiriira iibinta hantida iwm.
Istaraatiijiyooyinka ugu sarreeya ee maalgelinta dhabta ah ee bilowga ah
Maalgelinta hantida maguurtada ah waxaa loo arki karaa inay fuushan tahay buurta dusheeda taas oo ah halka hadafyadu yihiin oo buur -buur wanaagsan oo aan weligood ka cabsanayn dhererka. Markaad u sii socoto buurta guusha iyo xasilloonida maaliyadeed, waxay u badan tahay inuu la kulmo dhacdooyin muhiim ah kuwaas oo ah yoolalka-hoose. Xeeladaha aan ku siin doono waxay la mid yihiin qorshayaasha loo baahan yahay in la fuulo oo la gaadho meesha sare ee buurtaas xasiloonida maaliyadeed iyo yoolalka nolosha. Waa kuwan 15 xeeladood oo la tixgelinayo si loo dhammaystiro hawsha hortaala:
Hagaaji iyo Rog: Istaraatiijiyadan oo kale waxay ku lug leedahay helitaanka hanti u baahan dayactir xoogaa qiimo jaban, hagaajinteeda iyo dib -u -iibinta qiimo aad u sarreeya.
Caawinaad: Istaraatiijiyadani waxay ku lug leedahay inaad ka hesho guryaha heshiisyo wanaagsan oo aad dib ugu iibiso qiimayaasha waxoogaa ka sarreeya qiimaha iibsiga. Waxay u baahan tahay mid ku wanaagsan xayaysiinta iyo gorgortanka.
Aqalka Jabsiga: Tani waa marka qof kale uu bixiyo kharashka gurigaaga. Waxay ku lug leedahay inaad kiraysato meel yar oo gurigaaga ah si loo yareeyo kharashaadkaaga guriyeynta. Faa'iidooyinka istaraatiijiyadan ayaa ah inaad baratid sida loo maamulo ganacsiga mulkiilaha.
XIDHIIDHKA: 10ka Meel ee ugu Wanaagsan ee Lagu Iibiyo Cajalado Disney VHS
Live-In-Kadib-Kirada: Tani waxay si fudud ugu nooshahay guri ka dibna u kiraysanaysaa hadhow. Si ka duwan sida hacker -ka guriga ma kiraysanaysid guriga intaad ku dhex jirto.
Toos u-rogid: Xaaladdan oo kale waxaad iibsanaysaa guri, waxaad ku noolaan doontaa laba sano ama ka badan, hagaaji ka dibna dib ugu sii iibso qiimo sare si aad macaash u hesho.
Maalgelinta BRRRR: Habka Iibsashada-Dib-u-Kiraynta-Dib-u-Celinta (BRRRR). Ficil ahaan waxaad hagaajisaa guryaha lagu soo iibsado qiimo jaban ka dibna dib u maalgelinta deynta muddada-dheer.
gaaban Iibsashada iyo Sii-kiraysiga Muddada: Istaraatiijiyadan waxay ku lug leedahay iibsashada iyo haysashada guri muddo gaaban inta badan inta u dhaxaysa 1-5years. Waxay faa'iido badan u leedahay mashaariicda guryaha dabaqyada ah. Ujeeddada ugu weyn ee istaraatiijiyadani waa in lagu qasbo qaddarinta midkood dib -u -habaynta/dib -u -habaynta, yareynta kharashyada ama kor u qaadista kirada.
Long Iibsashada iyo Sii-kiraysiga Muddada: Istaraatiijiyadan ayaa sidoo kale lagu magacaabi karaa Qunyar iyo Joog. Tani waa sababta oo ah mulkiiluhu wuxuu damacsan yahay inuu hantida haysto muddo aad u dheer midkoodna maxaa yeelay waxay aad u qiimeeyaan. Hantiiluhu wuxuu ka kasbadaa istaraatiijiyadan qaab kharash -dhimis, cashuur -dhimis iwm.
The Qorshaha TradeUp: Istaraatiijiyaddan ayaa ah marka mulkiiluhu uu iibiyo gurigooda si uu u helo guri ka wanaagsan ama guri ku yaal deegaan aad u wanaagsan oo isticmaalaya sinnaanta guriga hadda jira.
kirada deynta Qorshaha barafka: Istaraatiijiyaddan qorshuhu waxay u fiican tahay in la saadaaliyo dhisidda hantida, yaraynta khataraha isla markaasna dakhli ka soo gala guryaha kirada ah. Waxay ku lug leedahay qaadashada socodka lacagta caddaanka ah ee dhammaan kirooyinka hadda jira oo u sii wad si aad u bixiso deymaha guriga.
All Qorshaha Kirada Lacageed: Istaraatiijiyadani waxay la mid tahay qorshaha barafka barafka deynta ee kirada laakiin kiiskan maalgashaduhu wuxuu kaydiyaa si uu u iibsado hanti, sidaasna uga fogaado deymaha.
Hard Amaahda Lacagta.
Maalgelinta Xusuus -dhimista: Istaraatiijiyadani waxay ku lug leedahay iibsashada ama abuurista qoraalo kuwaas oo ah daymaha hantida maguurtada ah ee qiimo jaban iyo dib u iibin. Tusaale ahaan mr Jones wuxuu ku maal gashaa $ 50,000 guri ka dibna wuxuu ka iibiyaa kiraystayaashiisa $ 80,000, halkii kiraystayaashu bangiga u aadi lahaayeen deyn wuxuu bixiyaa mr Jones $ 20,000 iyo mr jones ayaa isaguna maalgeliyay bixinta (tusaale ahaan wuxuu qaataa dulsaarka bishii iyo lacagaha aasaasiga ah).
Syndications iyo Caqabado badan: Tani waa hab lagu abuurayo koox leh amar kale oo imvestorsbin si loo iibsado nooca kale ee maalgashiga, taas oo ka hortagaysa nooc kasta oo deyn ah halka lacag -aruurintu ay la mid tahay qaab casriyeysan oo ah maal -galinta isku -xidhka halkaas oo wax walba lagu sameeyo aaladaha internetka in kasta oo inta badan madalkani kuu baahan yahay si uu u noqdo maalgaliye hanti ma guurto ah oo la aqoonsan yahay.
REITs: Real Estates Investment Trust waxay u saamaxdaa maalgashadayaasha inay lahaadaan qayb ka mid ah hantida soo saarta dakhli ganacsi oo badan. Si ka duwan qaababka kale ee maalgashiga hantida maguurtada ah, REITs waa hab dakhli dadban.
BADAN WEYDII SU'AALAHA (Su'aalaha)
Waa maxay madasha dad -weynaha ugu fiican ee loogu talagalay maalgashadayaasha la aqoonsan yahay?
Goobaha madasha ee dadku ku badan yihiin waxaa ka mid ah
Asxaabta Wadada Inc
Dabaqa dhulka, iyo
Real Aad u kacsan Inc
Samee si fiican inaad u samayso cilmi -baaris iyaga ka hor intaadan maalgelin.
Waa maxay iIn Caymiska Mulkiilaha Guriga?
Caymiska mulkiilaha waxaa kaloo loo gudbiyaa caymiska guriga. Waa nooc caymis hantiyeed oo daboolaya guri gaar loo leeyahay si uu gacan uga geysto dhisidda ama dayactirka kadib dhacdooyinka sida dabka qarxay ama waxyeellada ay sababeen kharashka dabiiciga ah.
Waa maxay Caymiska Cinwaanka?
Caymiska noocan ahi wuxuu u diidayaa iibsadayaasha iyo dayn -bixiyeyaasha inay ku socdaan khasaare maaliyadeed sababtoo ah cilladaha lahaanshaha hantida.
Waa maxay faraqa u dhexeeya dakhliga dadban iyo kan firfircoon?
Dakhliga dadban waa marka aad lacag ka kasbato maalgashi, si joogto ah adigoon dadaal dheeraad ah samayn. Halka dakhli firfircoon dhinaca kale macnaheedu yahay ka -qaybgalka joogtada ah ee hawsha la xidhiidha shaqadaada si aad lacag u hesho.
Goorma ma iibsan karaa oo iibin karaa hantida dhulkayga?
Waa inaad ka fekertaa inaad iibsato dhul marka qiimuhu yar yahay oo aad iibiso markii aad loo qiimeeyay laakiin ka hor markaa waxaad ku meelayn kartaa kiro intaad sugayso qaddarinta weyn.
Hantida guryaha waa hab aad u fiican oo lagu dhisi karo faylalka maalgashigaaga. Maalgashadayaasha badankoodu waxay isku daraan xeelado kala duwan si aanad u dareemin niyad -jab ama murugo haddii aad tijaabiso xeelad ayna shaqaynayn. Isla mar ahaantaana si fiican u samee natiijooyinkaaga oo si taxaddar leh u dooro ka hor intaadan ku biirin qorshe kasta oo maalgashi oo iska ilaali dib -u -dhigista sida ugu wanaagsan ee suurtogalka ah ee lagu guulaysan karo maalgelinta hantida maguurtada ah waxay ku xiran tahay diyaargarowgaaga inaad wax baratid, yoolalka noloshaada iyo sidoo kale awoodda aad u leedahay inaad qaadato halis. Ugu dambayn, ha ku maalgelin lacag waxaad u baahan doontaa isla markiiba.
13 Siyaabood Oo Lacag Loogu Sameeyo Hantida Ma guurtada Ah Iyadoo Aan Lacag Lahayn
Faallooyinka Saamiyada Realty | Sharci ama Fadeexad Maalgashi Hantiyeed oo Cusub?
Buugaagta ugu Fiican ee Laga Akhriyo Maalgelinta
Haddii aad waddo meherad yar, waxaad u baahan tahay aaladda saxda ah ee shaqada - mid ka mid ah…
Beddelka buugaagta cusub ee Fariimaha 2022: Barnaamijka Xisaabinta Miisaaniyadda-Ugu Fiican
Buugga cusub wuxuu siiyaa ganacsiyada yaryar fursad ay ku socodsiiyaan falanqaynta xisaabaadkooda, si kastaba ha ahaatee, Buugaagta cusubi aad bay qaali u yihiin,…
Shirkadaha ka ganacsada tamarta waa shirkado ka ganacsada wax soo saarka sida saliida ceyriinka ah, korontada,...
Sidee Paypal Lacag Ugu Sameysaa 2022 | Qaab Ganacsi oo Buuxa
Wali waxay dareemeysaa sir weyn sida magaca weyn ee "Paypal" u sameeyo lacagteeda. Waa wax...
Badeecad-Dhexdhexaad ah iyo Macaamiil-Qarshe: Qaabkee u Wanaagsan Ganacsigayga?
Bartilmaameedka iyo udub dhexaadka Macmiilka: meherad ayaad ku jirtaa? Waa wax laga xumaado in ganacsato badan iyo ...